ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): စိတ်အစမ်းသပ်ခံလေ့ကျင့်ပွဲတစ်ခုအတွက် ကိုနေလင်းမောင် ( Opposite-eye) သို့ ကျေးဇူးတင်လွှာ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:07 PM
Min Nyi Naung said...
one day he will realize what is honesty .if he isagovernment servent he will get afew amount of salary and he will make undertable money....that will be begining of dishonest..than .....more ...more..
ပထမပြောချင်တာကတော့ ငါက ကိုနေလင်းမောင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ..သူ့အနေနဲ့ကတော့ ဘလော့ဂ်မရေးတာ ကြာခဲ့ပါပြီ.. မင်းရေးတဲ့စာရယ်၊မျိူးချစ်ဆိုသူထံကဟာကို ကော်ပီဖော်ပြတာရယ် ပေါင်းစပ်ပြီး တပ်မတော်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မင်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ပို့စ်ကို ရေးလိုက်တာပါ..ကျွန်ခံတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကိုသုံးတာ ကျွန်စိတ်မွေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ..အနောက်တပ်တွေလာပါခေါ်၊ ပြည်တွင်းကို ရတဲ့နည်းနဲ့အပုပ်ချတဲ့ ကျွန်စိတ်မွေးသူအားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်..မင်းရေးလိုက်တဲ့ တဘောင်ဟာ မင်းအဖေအရွယ်မကတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်...သူများပြောတကို သံယောင်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ သံယောင်လိုက်သလို ရေးတာကို အပြစ်မဆိုလိုပါဘူး..ငါ့အမြင်မှာတော့ မင်းတို့အခုလိုအော်နေတာဟာ ဘာမှအရာမရောက်ဘူးဆိုတာ ခံစားနေရတာပဲ..၂၀၁၀ ပြီး၇င် မင်းတို့ဘာတွေဆက်အော်မလဲဆိုတာကို ငါကြိုတွေးလို့ရပါတယ်...နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို ဝေဖန်ဖို့အတွက်ကတော့ မင်းဒီထက်ပိုသိဖို့လိုမယ်လေ..ဒါဟာ တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံးကို စော်ကားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ငါရေးလိုက်တာပါ.. နောက်ကွန်မန့်မှာ မင်းအကြောင်းကို လာရေးထားတာကိုတွေ့လို့ အားလုံးဖတ်ရအောင် တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..မင်းလုံတယ်ဆိုရင်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်...နှမချင်းကိုယ်ချင်းစာလို့ မင်းဓာတ်ပုံရှိပေမယ့် ဓာတ်ပုံနဲ့တကွမတင်ပေးလိုက်တာပါ... ငါကိုယ်တိုင်လဲ မင်းအကြောင်းကို မသိတဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ မင်းနဲ့ပက်သက်တဲ့သတင်းဆိုရင် ယုံပါတယ်...ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်..ဒီလိုစာမျိုးတွေ၊ ကိုယ့်မိဘအရွယ်လူတစ်ယောက်ကို အသရေပျက်အောင် ပြောဆိုတယ်ဆိုကထဲက မင်းကိုယ်တိုင်ဟာ ဘယ်လိုမိန်းကလေးလဲဆိုတာ မင်းမိဘတွေကို ပြန်မေးကြည့်ပါ..မင်းမိဘတွေကို မင်းကို ပြန်ဆုံးမပါလိမ့်မယ်.. ငါရေးလိုက်တဲ့စာထဲမှာတော့ မင်းကိုဘာမှမသိတဲ့ ငါ့ညီမတစ်ယောက်လိုပဲ နောင်မှာဆင်ခြင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်....
နောက်တစ်ခုကပြောလိုက်ပါ့မယ်..မင်းတို့ပြည်ပကနေ ကြိုက်၇ာအော်ပါ..ပြည်တွင်းကိုတော့ လာမထိခိုက်စေနဲ့..တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံး၊စစ်သားတွေအကုန်လုံးကို စော်ကားသလိုတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့...ငါတို့ဟာ မြန်မာပြည်တစ်ခုထဲက မွေးဖွားလာသူတွေပါ..ကိုယ့်ပြည်တွင်းထဲမှာနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကို ပါးစပ်နဲ့ရှင်းသလို၊သေနတ်နဲ့လဲ ရှင်းရပါတယ်... မင်းတို့ပြည်ပရောက် တိုင်းပြည်အဖျက်တွေအတွက်ကတော့ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံပြီး ဆက်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့..
Let's see how these slaves of good-for-nothing Burmese junta will reply.
Opposite-eye ရေ .. အခုလို မခံမရပ်နိုင်စွာ လာပြောတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် .. ။ သိပ်ရီရတာပဲနော် .. ။ ကျွန်မဓါတ်ပုံကို နှမချင်းစာနာလို့ မတင်ပေးတာတဲ့ ။ ခပ်ရဲရဲကြိးတင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မဓါတ်ပုံဟာ ကျွန်မဘလော့ခ်အောက်ခြေမှာ အမြဲတမ်း သေသေချာချာ တင်ပေးခဲ့တဲ့ ပုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မပုံကိုရတာများ ... လူအမြင်မှားအောင် .. စကားကို ယောက်ျားတန်မဲ့ ဟိုလှည့်ဒီလှည့်ပြောဆိုလိုက်နဲ့ .. ။ ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းပါပြီ။ ရှင်တို့နဲ့စကားပြောရတာတောင် အင်မတန် ရွံရှာဖွယ်ကောင်းနေပါပြီ။ တပ်မတော်ကို မစော်ကားဘူး ။ ထပ်ပြောလိုက်မယ် .. ။ အာဏာ၇ှင်စနစ်ကိုဖန်တီးနေတဲ့ နအဖတစ်အုပ်စုလုံးကိုတော့ အသဲထဲကရွံတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းကို ခြေဖျက်ချင်ရင် အပြောနဲ့ မရဘူး ... အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြပါလို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ထပ်မံပြောဆိုလိုက်ပါတယ် .. ။ ရှင့်အကြောင်း ကျွန်မ မသိ .. စိတ်မ၀င်စားသလို ကျွန်မအကြောင်းကို လာပြောတယ်ဆိုရင် ဒါတွေဟာ မှန်သလား .. မှားသလား အရင်စစ်ဆေးရတယ် .. ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို နှလုံးရည်ချင်း မယှဉ်နိုင်ရင် အောက်တန်းကျတဲ့ မိုက်ရိုင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စော်ကားပြောဆိုတတ်တာ ရှင်တို့ နအဖစစ်သားတွေအကျင့်ထင်ပါရဲ့။ ကဲ ထားပါလေ ... လူမဟုတ်သူကို လူလိုပြောနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး .. ။
Ma Muyar said...
ကိုးန၀င်းလက်စွပ်ကြီးဝတ်ပြီး ဆင်ရေချိုးတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် တယောက် မြောင်းထဲရောက်သွားတာ မြင်တယ်ဟုတ်။ နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေ ဗေဒင် ယတြာ ဘိုးတော်မှန်သမျှ အလွန်အကျူး ယုံကြည်တာ တကမ္ဘာလုံး သိကြပါတယ်။ သူတို့ လုပ်သမျှတွေဟာ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် ဆီလျော်မှု မရှိတော့ လူတွေက ဗေဒင်အရလုပ်တာလို့ ယူဆကြတာ မလွန်ပါဘူး။ သို့သော်လဲပေါ့လေ... ကောက်ရိုးပုံစောင့်တဲ့ ခွေတွေကတော့ မဲမဲမြင်သမျှ ထိုးဟောင်တတ်တာပါပဲ။ သူ့အတွက် အရိုးရဖို့က အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား။
I WAS REALLY IMPRESSED WITH YOUR REPLY. THAT'S OUR MYANMAR NATION PROUD OF YOU.
မင်းရေးလိုက်တဲ့ န.အ.ဖ နောက်လိုက်များကို ဆုံးမထားတဲ့ ပို့စ်အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ညီမလေးရေ...ဒီကောင်တွေကို လူလို ပြောလို့ မရဘူးဆိုတာကို မမေ့ပစ်လိုက်နဲ့အုံး။
"မင်းတို့ပြည်ပကနေ ကြိုက်၇ာအော်ပါ..ပြည်တွင်းကိုတော့ လာမထိခိုက်စေနဲ့..တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံး၊စစ်သားတွေအကုန်လုံးကို စော်ကားသလိုတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့...ငါတို့ဟာ မြန်မာပြည်တစ်ခုထဲက မွေးဖွားလာသူတွေပါ..ကိုယ့်ပြည်တွင်းထဲမှာနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကို ပါးစပ်နဲ့ရှင်းသလို၊သေနတ်နဲ့လဲ ရှင်းရပါတယ်... မင်းတို့ပြည်ပရောက် တိုင်းပြည်အဖျက်တွေအတွက်ကတော့ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံပြီး ဆက်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့.."
အင်း... ဒါဆိုရင် သူကရော ပြည်ပကနေ အကူအညီယူတာ မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးချင်တယ်။ ဒီမို ဘက်က လူတွေကို တော့ ပြည်ပက တပ်တွေ လာပါကူပါလို့ခေါ်ပြီး လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ကျတော့ တရုတ်နဲ့ရုရှားကို ခေါ်ပြီး ဗီဒို အာဏာသုံးခိုင်းတာကျတော့ ဘယ်မှာ သွားထားလိုက်တာလဲ။ ပြည်ပက အဖျက်တွေပြောရအောင်လို့သူတို့ က ပြည်တွင်းမှာ တော်တော်လေး ကောင်းရာကောင်းကြောင်း လုပ်ခဲ့ကြ တာကိုး။ စစ်သားမာနတဲ့.......ဟားဟားဟား......မပြောဘဲနဲ့ဝါးလုံးကွဲ ရယ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ရှရှားက ပြည်ပအားကိုးကောင်တွေကို ပြောရအုံးမယ် စကားပုံတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ "ဗုံလုံးတစ်လှည့် ငါးပျံတစ်လှည့် " ဆိုတာ ကြားဖူးမှာပေါ့ကွာ။ မင်းတို့လုပ်လို့ ရတုန်း လုပ်ထားကြပေးအုံးပေ့ါကွာ။ အလှည့်ကျ ရင် မနွဲ့ စတန်းဘဲ ဗိုလ်ပေါက်စရေ။
ဟုတ်ပါပြီဗျာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ ဟိုလူမှန်တယ်ဒီလူမှန်တယ်ပြိုင်နေလိုက်ကြတာ တကယ့်ကိုရှက်စရာပါပဲ...ဟုတ်ပါပြီနော်...ဒီမိုကရေစီခေတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်.ဘယ်ခေတ်ပဲေ၇ာက်နေရောက်နေပေါ့...တကယ့်တကယ် စစ်ပွဲကြီးတခုဖြစ်လာပြီထားပါတော့တပ်မတော်ဆိုတာကတော့သေနတ်ဆွဲပြီးရှေ့ဆုံးကအသေခံတိုက်ရမှာပဲ..အဲလိုချိန်မှာ ကီးဘုတ်လေးပေါ်လက်တင်ပြီးမြန်မာပြည်ကြီးကောင်းစားရေး..ကောင်းစားရေးဆိုပြီးကြွေးကြော်နေတဲ့သူရဲကောင်းကြီးတွေက ဘာလုပ်မှာလဲဟင်..ဗုံးခိုကျင်းထဲမှာတစ်လစာရိက္ခာစုပြီးဝင်ပုန်းနေမှာလားမသိဘူး..စကားပြောတဲ့အခါမှာ အကုန်လုံးကိုသိမ်းကျုံးပြီးမပြောကြပါနဲ့ ...လူတစ်ယောက်ကို ချီးကျူးဖို့ အကြောင်းရှာတာသာခက်တာပါ..အပြစ်ပြောဖို့ ဆိုရင်တော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြစ်ချက်တွေ...ကဲကဲဒီတော့ မပြီးခင်ဗမာမမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်း ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးမှပဲဆက်ဝေဖန်ကြတော့နော်..မပြီးသေးခင်ကတော့ ဝေဖန်မနေပါနဲ့ ...ပါးစပ်ပိတ်ပြီးစောင့်နေလိုက်ကြနော်..ဘယ်သူတွေပဲအာဏာရနေရနေ..တပ်မတော်ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ၇ှိနေမှာပါ...ပြီးတော့ဗိုလ်ပေါက်စဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုမသုံးပါနဲ့ ...တပ်မတော်မှာဗိုလ်ဖြစ်ခါစအရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ အသက် ၃၀ လောက်ရှိတဲ့အရပ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ထက်ပိုမိုရင့်ကျက်နေပါပြီ..ကဲကဲ ရန်ဖြစ်မနေကြနဲ့ တော့နော်...အားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးဆီသွားကြတာပေါ့...ရင်ြလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ....